Charchit Online Khabar » नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप बलियो हुन्छ :बाइडेन
प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०९:५२
काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन समक्ष अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण पत्राचारमार्फत ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाइएको हो ।
यसैबीच नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले समकक्षी खतिवडाको सफल कार्यकालको कामना गर्नुभएको छ । नेपालको अर्थमन्त्री रहनुहुँदा डा. खतिवडासँग विभिन्न कार्यमा अमेरिकाले सहकार्य गरेको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले राजदूत भएपछि दुई देशको सम्बन्ध र सहकार्य अझ फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।गोरखापत्र बाट